हाम्राे पिपलबाेट » हरेक नेपालि जनता किन कांग्रेस हुने ? हेर्नुहाेस् भिडियो हरेक नेपालि जनता किन कांग्रेस हुने ? हेर्नुहाेस् भिडियो – हाम्राे पिपलबाेट
क्रान्ति कसरी हुन्छरु क्रान्तिको परिभाषा के होरु क्रान्तिको महत्पूर्ण कारकतत्व के हुन्छरु व्यक्ति क्रान्तिमा कति महत्वपूर्ण हुन्छरु यताका दशकहरुमा त्यस विषयमा प्रशस्त शोधकार्यहरु भएका छन्। सात सालको क्रान्तिलाई बुझ्न सर्वप्रथम हामीले राणा शाहीको अन्तर विरोधलाई बुझ्नुपर्छ। अन्य कुनै कारण भन्दा राणाशाहीको पतनको कारण उनीहरुबीचको अन्तर विरोध नै प्रमुख थियो। र त्यो अन्तर विरोध अत्यन्त चर्को थियो। यस आधारभूत तथ्यलाई हृदयंगम गरेपछि मात्र हामी नेपाली कांग्रेसको देनका उपर जान्छौं। नेपाली कांग्रेसको देनका अगाडि भारत सरकारको अभिक्रम र राजा त्रिभुवनको पलायनको कथापनि तुलनीय छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो स्थापना सम्मेलनदेखि लिएर प्रचण्डको जनयुद्धसम्म कम्युनिष्टहरुले सात सालको क्रान्तिको अवमूल्यन गरे। त्यो अवमूल्यन अहिले पनि जारी छ। अहिले पनि मानिसहरु भन्छन्, सात सालको क्रान्तिले के गर्योरु कुनै पनि क्रान्ति अध्ययनको यो गम्भीर विषय हो। कुन क्रान्तिले के पो गर्छ तरु यताका दशकमा सात सालको क्रान्तिको अवमूल्यनका धेरै प्रयासहरु भए। क्रान्तिको रापताप रहँदै तत्कालीन युवराजधिराज सात सालको क्रान्तिको खिल्ली उडाउन थालेका थिए। महेन्द्र बलियो भएपछि त सात सालको क्रान्तिमा जनताको भूमिका थियो भन्ने कुरा धुमिल भएर गयो। नेपाली कांग्रेसको चर्चासमेत भएन। राजा त्रिभुवन नै सात सालका क्रान्तिका नियामक, नियोजक र हर्ताकर्ता थिए भन्ने कुरा जोडदार रुपमा आयो।
यसले हामीलाई सात सालको क्रान्ति, ०४६ सालको परिवर्तन र अहिले ०६२÷०६३ को आन्दोलनले निरास बनाउनु हुँदैन। हामीले मान्छेको अनुहार हेर्नु हुँदैन र गहिरिएर सोच्नुपर्छ। धेरै सोच्नुपर्छ सात सालको क्रान्तिले मान्छेका बारेमा के काम गर्यो त भनेररु नेपालमा त्यतिन्जेलसम्म मुखै कानुन थियो। ‘हुकुमको जवाफ छैन र कालको औषधि छैन’ भन्ने मनस्थिति थियो। सात सालको क्रान्तिमै संविधानसभाको नारा थियो र त्यो पछि भएरै छाड्यो। यति हुँदाहुँदै पनि किन हो विभिन्न बामपन्थीहरु खसगरी पछिल्लो चरणमा माओवादीहरुले सात सालको क्रान्तिको निकै उपहास गरे। निश्चय नै त्यो उपहास सात सालको क्रान्तिको होइन, क्रान्तिका विषयमा उनीहरुको समझादारीको अधुरोपन हो।
१२ मंसिर २०७४ मा प्रकाशित